Kurdiyiinta Ciraaq Oo HAA Ugu Codeeyay in Ay madax banaanaadaan – Balcad.com Teyteyleey
Shir Jaraa’id oo magaalada Arbiil ay ku qabteen madaxda ugu sarraysa guddiga ayaa lagu sheegay in 92% shacabka Kurdiyiinta ay u codeeyeen in Kurdistan ay noqoto dal madax banaan dalweynaha Ciraaq intiisa kale.
Dabaal degyo ay dhigayaan dadka Kurdiyiinta ayaa durbadiiba ka bilaawday dhammaan magaalooyinka gobolka Kurdistaan sida Suleymaaniya,Arbiil iyo Xalabjah, in kabadan 72% ayaa la xaqiijiyay in ay codeeyeen shacabka Kurdiyiinta.
Mascuud Barazaani oo ah hoggaamiyaha maamul gobolkeedka Kurdistan ayaa soo dhaweeyay natiijada Aftida wuxuuna ugu baaqay xukuumadda Ciraaq iyo dowladaha gobolka in ay xaalada dajiyaan oo ay wadahadal lagalaan dowladdiisa curdunka ah.
Dhinaca kale xukuumadda Baqdaad ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha caalamiga ah ee ka dagi jiray magaalooyinka waaweyn ee gobolka Kurdistaan.
The post Kurdiyiinta Ciraaq Oo HAA Ugu Codeeyay in Ay madax banaanaadaan appeared first on Ilwareed Online.
Yuusuf Garaad “M/Gobaleedyada go’aanada ay qaateen waxba u dhimi doonaan Madaxbanaanida Soomaaliya..”